Indlela yokwenza iVidiyo ye-YouTube efakwe kwi-YouTube
Web & Search Ukuqhuba iWebhu
Yenza iVidiyo ye-YouTube efakwe kwi-YouTube ekhompyutheni
I-YouTube yenza lula kakhulu ukuba ungene kwividiyo (oko kukuthi, faka ividiyo) malunga naluphi na iphepha lewebhu ofuna. Yintoni abantu abaninzi abangaqapheliyo kukuba i-YouTube nayo ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso amava abafundi bakho abone. Umzekelo, ungatshintsha ubungakanani befestile eya kudlala ividyo. Heck, ukuba ungenayo ngokwenene, ungatshintsha phantse iimitha ezimbini. Kodwa masicinge ukuba ufuna ukushumeka ividyo kwaye wenze nje izinto ezimbalwa ezizenzekelayo.
Indlela yokufumana i-Embed Code
Emva kokuba ufumene ividiyo othanda ukuyifaka, jonga iqhosha lesabelo eliphantsi kwevidiyo (kunye nangaphantsi kwevidiyo). Iqhosha libukeka njengento ecacileyo yodwa. Xa ucofa ukuba imenyu emitsha, eneembobo ziza kubonakala kwaye enye yezinto ezikhethiweyo ziyakushumeka. Emva kokuqakraza umgca, uza kubona umtya omude weetekisi ekhangayo. Musa ukukhathazeka malunga noko kuthetha ntoni, yiyo kuphela ikhowudi oza kudlulela kwiphepha lakho lewebhu.
Indlela yokwenza i-Embed Embed Code
Ngoku ukuba unayo ikhowudi, nqakraza inkinobho ye-Bonisa ngakumbi ekhoyo phantsi kwekhowudi. Apha uya kufumana ezinye iindlela eziza kuyenza iifayile kwi-site yakho. Njengomhla wokupapashwa, ukhetho lwaluyilo: Ubungakanani bevidiyo, bonisa ividiyo ephakanyisiweyo xa ividiyo iphela, bonisa ukulawulwa komdlali, ubonise isihloko sevidiyo kunye nesenzo somdlali, nokuba ingaba yenze indlela yokukhusela ngasese (ungakhathazeki, isayithi liya kuchaza oko kuthetha ntoni ukuba awukwazi).
Indlela yokwenza iComputer Code ngakumbi
I-YouTube ivumela ukuba ulungele ngakumbi xa uyazi indlela yokutshintsha ikhowudi. Ininzi yethu ayiyazi indlela yokwenza ngayo ikhowudi, kodwa sifumane isayithi evumela ukuba uyifake ngokwezifiso kwintliziyo yakho. Asiyikulawula isayithi okanye siqinisekise ukuba ikhowudi iyavelisa, kodwa isebenza ngathi. Nantsi indlela yokwenza izinto ezilungelelanisa ividiyo kwi-inthanethi. Enye yezinto ezintle kakhulu kukuba unokusetha ixesha lokuqala nelokugqibela levidiyo ukuze ubonise umfundi wakho okokufunayo ukuba babone. Oko akugcini nje kukusindise ekuchazeni kubafundi bakho xa izinto ezilungileyo ziqala, kwakhona kusindisa ixesha lakho lokufunda (kunye nokukhungatheka).
Oo, ukuba unomdla, unako ukubona zonke iiparameter ezahlukileyo ezenziwe ngokwezifiso ezivela kumlomo wehashe.
Izikhala ze-MSN - I-Blogging Site
Indlela yokumisela igama leDesign Domain kwiTumblr
Yintoni iBluebar Side?
Bhala kwi-HTML: Iingcombolo ze-HTML eziSiseko
Shintsha Iwebhusayithi Yakho ku-HTML
Kuphi Ukufumana Imisebenzi Yokubhankelwa Kwebhilidi
Iingcebiso Zentlawulo kwiBlogger Blogger
Ukuguqula ifayile yeFoodfox Ukukhuphela izicwangciso nge-About: config
Ukuhlaziywa kweGazethi, i-iPhone esetyenziswayo kunye ne-iPod Umthengi / Intengiso
Indlela yokususa isakhiwo seNkxaso ye-3D eprintiweyo
Beka Umbhalo Ngaphezulu kweVidiyo ukukhupha i-PowerPoint 2010 Iislayidi zakho
Yintoni i-IRQ (Ukuphazamisa isicelo)?
Iyiphi impawu ye-ID?
Indlela yeeMifanekiso zeMatermark kwi-Photoshop Elements
Ukubambisana kukuthintela njani isandi sakho
Indlela yokuvumelanisa i-iPhone phezu kwe-Wi-Fi
I-Best Photoshop Brush Plugin
Yintoni i-Intanethi eyenziwe nge-Intanethi?
Kukho iindlela ezili-7 zokufaka umbhalo kwi-Apple yakho ye-TV
Iiprogram ezi-5 ze-Free Calling ze-Apple iOS
Indlela yokulungisa i-Msvcr70.dll Ayifumananga okanye Ayiphutheli Iimpazamo
'I-Sims 2: iYunivesithi'-Ukujoyina iMbutho eyimfihlo
Indlela Yokunqanda Ukukhangela kweGoogle kwiiNdawo eziZodwa
Indlela yokwakha umfanekiso weMephu ngaphandle koMfanekiso weMephu yoMhleli
Ziziphi ii "ihostels" Mechanism kwiLinux / Unix?
Indlela yokuHlaziya kwakhona okanye Ukuqalisa kwakhona iPod Mini efriji kwiZinyathelo ezi-3